नागार्जुनमा एकसाथ विष पिउने ५ जनाको परिवारले लेखेको सुसाइड नोट भेटियो — Imandarmedia.com
नागार्जुनमा एकसाथ विष पिउने ५ जनाको परिवारले लेखेको सुसाइड नोट भेटियो
काठमाडौं। काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–६ रामकोटस्थित डाँडापौवामा सोमबार राति विष पिएको परिवारका सदस्यहरु आफूहरु संयुक्त रुपमा विदा हुदैछौ भनेर लेखेको सुसाइट नोट फेला परेको छ।
हामी सयुक्त रुपमा विदा हुदैछौ भन्ने सुसाइट नोट भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। विष पिएका मध्ये ४ जनाको गम्भीर अवस्थमा उपचार भइरहेको छ भने एक जनाको मृत्यु भएको छ।
६२ वर्षीया इन्दिरामाया प्रधान सहित विष पिएका ४ जनाको स्वयम्भूस्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको महानगरीय प्रहरी स्वयम्भू वृत्तका डिएसपी मिलन केसीले जानकारी दिए।
सुवर्णमान प्रधानको गएराति नै मृत्यु भएको थियो। इन्दिरामाया प्रधानसहित ३८ वर्षका भिम प्रधान, ३५ वर्षीया मन्दिरा डंगोल र ११ वर्षीया सुप्रेणा प्रधानको अवस्था गम्भीर छ।
डाडाँपौवास्थित डा. उद्धव पुरीको घरमा उनीहरु डेरामा बस्थे। डेरामा विषका बट्टाहरू र पानीको बोतलमा घोलेर बाँकी रहेको विष फेला परेको छ। सबै जना अचेत भएकाले विष सेवन गर्नुको कारण नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
सोमबार राती साढे नौ बजेतिर उनीहरुलाई अचेत अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। गेटमा ताल्चा लगाएर भित्र उनीहरु अचेत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। तेस्तै, तीन वर्ष बोक्सी भन्दै स्थानीयबाट कुटपिटमा परेकी राधा चौधरी विस्तारै पीडा भुल्दैछिन्।
घरायसी काममा व्यस्त हुने राधाको घाउमा समाजले मल्हम लगाइरहेको छ। समाजमा जाँदा गलत व्यवहार भएको मैले पाएको छैन, राधा भन्छिन्, सबैले माया गरेका छन्, आवश्यक परेको सहयोग सबैले गरिरहेका छन्, जसले मलाई विगतको पीडा बिसर्न मद्दत गरेको छ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका-५ देउकलियामा बस्दै आएकी राधा चौधरीमाथि २४ फागुन २०७५ नारी दिवसकै दिन बोक्सीको आरोपमा स्थानीय भोले बाबा भनिने रामबहादुर चौधरी लगायतका व्यक्तिले निर्घात कुटपिट गरेका थिए ।
बोक्सीको आरोप लगाउँदै निर्धात कुटपिट गरेपछि एक डेढ वर्षसम्म समाजमा घुलमिल हुन धेरै समस्या भयो, राधाले भनिन्, अहिले पहिलाको भन्दा धेरै सजिलो भएको छ, सबैले चिन्छन् र राम्रो व्यवहार पनि पाएकी छु। अहिले राधाको मगनी भइसकेको छ।
आउँदो वर्ष बिहे हुने पक्का भएको छ। मगनीपछि राधा आफ्ना पीडालाई बिर्सदैँ नयाँ जीवनको सपनामा रमाउन थालेकी छन्। तर, कुरा काट्ने सामाजिक परिपार्टीका कारण भने अहिले पनि राधालाई केही असहज भइरहेको छ।
मेरो अगाडि कसैले केही कुरा गर्दैनन्, उनले भनिन्, तर, समाजमा अझै पनि मेराबारेमा धेरै नकारात्मक कुरा भइरहेका पाइन्छन्, त्यसले मलाई अझै पनि झस्काइरहन्छ, फेरि सबै मिलेर दुर्व्यवहार गर्ने पो हुन् कि भन्ने पिर परिरहन्छ।
बोक्सीको आरोपमा कुटपिटमा परेपछि राधालाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो सहयोग उनले अझै पाएकी छैनन्। घोडाघोडी नगरपालिकाले रोज्गारी दिने आश्वासन दिए पनि अहिले फर्केरसमेत नहेरेको उनको गुनासो छ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीले नै मलाई रोजगारी दिने आश्वासन दिनु भएको थियो, पीडित राधाले भनिन्, ‘मैले उहाँलाई तीन/चार पटक भेटेरै सम्झाएँ। तर, मेयरसावले केही प्रतिक्रिया दिनुभएन, पछिल्लो समय भेट नै भएको छैन।
बोक्सीको आरोप लगाइएपछि राधालाई पढाइमा सहयोग गर्ने र रोजगारीका अवसरमा जोड्ने घोडाघोडी नगरपालिकाले प्रतिबद्धता गरेको थियो । यस विषयमा घोडाघोडी नगरपालिकाकी उप मेयर प्रेमाकुमारी थापाले केही जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिइन्।
बोक्सीको आरोप खेपेकी राधालाई पढ्ने वातावरण बनाउने र स्थानीय स्तरमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा नगरसभामा केही निर्णय पनि भएका थिए, उप मेयर थापाले भनिन्, तर ती निर्णय कार्यान्वयन भए, नभएको बारेमा मलाई जानकारी भएन।
उसो त राधाले पीडक पक्षले दिने भनेको क्षतिपूर्तिवापतको सहयोग समेत पाएकी छैनन्। पीडक पक्षले दिने गरी अदालतले नै क्षतिपूर्ति तोकेको भए पनि सो रकम नपाएको राधाले बताइन्। पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति नदिएपछि मानवअधिकार आयोगमा पनि गएको बताउँदै राधाले भनिन्,
‘मानवअधिकार आयोगको कार्यालयले पनि पत्र काटेर दिएको थियो। तर, त्यसको पनि बेवास्ता गरिएको छ। क्षतिपूर्तिवापतको रकम कसले दिने हो ? भन्ने विषयमा समेत आफुलाई जानकारी नभएको राधाले बताइन्।
बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट गरेको अभियोगमा दोषि ठहर गर्दै भोलेवावा भनिने रामबहादुर चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पाँच वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासले भोलेबाबासँगै कुटपिटमा सघाउने सहयोगी किस्मती चौधरीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा स्मारिका चौधरीलाई ६ महिना कैद र २५ हजार जरिवाना भराउने गरी फैसला सुनाएको थियो।
भोलेबाबालाई सहयोग रहेको भन्दै पक्राउ परेका घोडाघोडी नगरपालिका-५ कै स्थानीय चनकलाल चौधरी, वेदप्रसाद चौधरी र सीतारानी चौधरीलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो।